မကြာခင် မြန်မာနိုင်ငံသွားရောက်ဖို့ ရှိနေတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းရဲ့ ခရီးစဉ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံက မပြေလည်နိုင်သေးတဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအတွက် အထောက်အကူ ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ကြောင်း အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေက ပြောပါတယ်။
ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ခရီးစဉ်တွင် တရုတ်နယ်စပ်နှင့် ဆက်စပ်သော ကစထမှူးများ လိုက်ပါသွား
NEJ / ၁၈ ဇွန် ၂၀၀၉ “ဗိုလ်မောင်အေးလာတဲ့ခရီးစဉ်ထဲမှာ အခြားအကြောင်းရင်း တွေလည်း အများကြီးပါတယ်။ ဟိုနှစ်ယောက် တာဝန်ယူထား တဲ့ တရုတ်နယ်စပ်က ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ ....” အပြည့်အစုံသို့
NEJ / ၁၈ ဇွန် ၂၀၀၉ “လယ်သမားတွေကို ငွေထုတ်ချေးပေးနေတယ်ဆိုပေမယ့် မယက၊ မြေစာရင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး စတဲ့ အစိုးရပိုင်း ဌာနဆိုင်ရာ က ထောက်ခံတဲ့ လယ်သမားတွေကိုပဲ ....” အပြည့်အစုံသို့
ငွေ (၅) သိန်းပေးပါက စစ်တပ်ကျောင်းတွင်
NEJ / ၁၈ ဇွန် ၂၀၀၉ “(၅) သိန်း ဆိုလည်း ပေးလိုက်တာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီကျောင်းက စစ်တပ်က ကျောင်းလေ။ ဒီတော့ စာမေးပွဲ စစ်တဲ့အခါ ဆရာမတွေက တင်းကျပ်တဲ့ ...” အပြည့်အစုံသို့
ပြည်ပ သတင်းစီးဆင်းနေမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်
၀ီရ / ၁၈ ဇွန် ၂၀၀၉ “ဖြစ်တာက တီဟီရန်မှာ ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စကြောင့်လို့ပဲ ကျနော်တို့ သတင်းသမားတွေ ယူဆကြတယ်။ အဲဒီ (အီရန်) ဆန္ဒပြတဲ့ အကြောင်းကို ရေးလိုက်ရင်လည်း ....”အပြည့်အစုံသို့
(၆၄) နှစ်မြောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး အတွေးစများ
ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ / ၁၈ ဇွန် ၂၀၀၉
မေ့လောက်မှဖြစ်စေ၊ ကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်စေ၊ နှစ်ပတ်လည်လို့ ဖြစ်စေ၊ ပရိုပိုဇယ်ရလို့ဖြစ်စေ၊ ဒုက္ခသည် ခံယူချင်လို့ဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံရေးခိုလှုံခွင့် လျှောက်ချင်လို့ဖြစ်စေ အနှစ် (၂၀) ကျော် အတွင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက်... အပြည့်အစုံသို့
ကရင် အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်လိုခြင်း မရှိသဖြင့် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) က သူ၏ တပ်မဟာ ၇ နယ်မြေရှိ စခန်းများကို စွန့်လွှတ်မည်ဟု ကရင် တိုင်းရင်းသား သတင်း
နအဖစစ်တပ်က ဒေသခံ ကချင်ကျောင်းသားများ အပါဝင် ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ်ရှိ မရမ်းရွာမှ ကချင် လူငယ်တို့အား ရိုက်နက်ညှဉ်းပန်းမှုများ ရှိကြောင်း ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက်
အစိုးရ ဆက်သွယ်ရေး၊ စာတိုက်နှင့် ကြေးနန်းဝန်ကြီး ဌာနက လာမည့် ခြောက်လအတွင်း ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် GSM မိုဘိုင်းလ်နှင့် CDMA ဖုန်းလိုင်းပေါင်း နှစ်သိန်းကျော်
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အသက် ၆၄ နှစ်ပြည့် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အနေနှင့် ချိုးနှင့်ငှက်များ လွှတ်ရန်
စစ်အစိုးရက ဘန်ကီမွန်းကို မြန်မာပြည် လာခွင့်ပေး
မြန်မာ စစ်အစိုးရက ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းကို လာမည့် ဇူလိုင်လ အစောပိုင်းတွင် မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်ရန် ဖိတ်ကြားကြောင်း အနောက်တိုင်း
ထိုင်းတွင် A (H1N1) တုပ်ကွေးကူးစက်ခံရသူ ၅၀၀ ကျော် ရှိပြီ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် A (H1N1) တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်ခံထားရသူပေါင်း ၅၁၈ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှာ ဦးရေ ထက်ဝက်ကျော်သည် ဘန်ကောက်အုပ်ချုပ်ရေး နယ်အတွင်း...
မနက်ဖြန်တွင် ကျရောက်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ မတိုင်မီ တရက်အလိုတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့ပေါ်၌ လုံခြုံရေးများ တင်းကျပ်စွာ ချထားကြောင်း ဒေသခံများ အဆိုအရ...
မီဇိုရမ်သို့ တရားမဝင် ဝင်ရောက်သူများ ပြန်ရန် တရားရုံးက အမိန့်ချ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အတွင်း တရားမဝင် ဝင်ရောက်နေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ၁၅ ရက်အတွင်း နိုင်ငံရင်းသို့ပြန်ရန် တရားရုံးက အမိန့်ချမှတ်လိုက် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် သူမ၏ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရသည့်ကာလက …. တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းလေးသာဖြစ်သည်။ တိတိပပတွက်စစ်ပါမူ ….. စုစုပေါင်း ၂၅ လမျှသာ….။ ဤမျှတိုတောင်းသော အချိန်လေးများကိုပင် ပြည့်ပြည့်ဝဝ အတူနေခဲ့ကြရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနှင့် သူမ၏ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ရသည့်ကာလက …. တိုတိုကျဉ်းကျဉ်းလေးသာဖြစ်သည်။ တိတိပပတွက်စစ်ပါမူ ….. စုစုပေါင်း ၂၅ လမျှသာ….။...
မတရား မပြောနဲ့ 
ဆယ့်ကိုးရက်နေ့ ဇွန်လ ဟာ
၁၆၊ ၆၊ ၂၀၀၉
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဥပမာပေး ဝခေါင်းဆောင်များက အသွင်ပြောင်းရေးငြင်းဆန်
Wa Earns Respect.
JAC ,CAC တို့မှ ပေးပို့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၆၄နှ...